Onye Nduzi | Onye Isi Ndu | NextMapping
Obi ò siri gị ike maka ọdịnihu? Are nwere obi uto banyere ohere ị nwere maka gị na azụmahịa gị n'ọdịnihu?
Nkuzi nke onye isi anyi nke NextMapping will gha enye gi usoro, nkwado na ntuzi aka iji wee di nma. Onye ọ bụla na - eme nke ọma na - eji onye na - azụ ahịa ma ọ bụ onye na - ahụ maka ndị isi na - eduzi ndị nkuzi / ndu.
Anyị NextMapping ™ nyere ndi nkuzi ahia ahia ga-esoro gị rụọ atụmatụ, mee ka uche gị na -eche maka ọrụ echiche ma nyere gị aka ịzụlite amamihe dị gị mkpa iji wee na-eto ma mekwa nke ọma n'oge ọsọ ọsọ.
Ọnọdụ ọgba aghara na-aga n'ihu ga-aga n'ihu na-abawanye ụba - onye na-esote gị bụ onye ọchụnta ego nwere echiche nke mepụtara Air BNB, Uber, Dropbox na Tesla.
Enwere ụdị mindets abụọ…
Na ndị mmadụ nwere banyere ọdịnihu:
1. M ga-echegbu onwe ya maka ya oge ọ metụtara m / azụmahịa… MA Ọ B 2. XNUMX. Weta ya! M obi ụtọ banyere ọdịnihu na m na-aga ime ihe niile m nwere ike ime iji dịrị njikere maka m / m otu / azụmahịa. Uche mbụ bụ uche ụkọ lekwasịrị anya n'ichebe ọnọdụ na ụjọ mgbanwe. Uzo nke abuo bu uche zuru oke nke na elekwasiri ike ijikwa ma nye ikike ime ka uzo gi di egwu. Otu n'ime nsogbu kachasị nye ndị isi, otu na ndị ọchụnta ego na-anọ n'ike mmụọ nsọ ma lekwasị anya n'ọdịnihu. Ọtụtụ ndị ndu na-elekwasị anya n'ihe dị adị kwa ụbọchị, na-agbanyụ ọkụ ma na-elegharakarị ọhụụ ma ọ bụ na-eduga n'ọdịnihu dị egwu. Iji mepụta usoro ndu ga-adigide ma kwughachi ya na ndị ndu ga-enwe usoro ha ga-eji wee mepụta ihe ga-esiri anyị ike 'ihe na-esote' yana ịza ajụjụ iji mee mgbanwe ndị dị mkpa iji dị njikere n'ọdịnihu. Enwere sayensị na mgbanwe na ndị ọkà mmụta sayensị akparamàgwà mmadụ achọpụtala ihe ndị bụ isi nke ime mgbanwe na-adigide na anya maka ọdịnihu. Ihe ndị ahụ bụ isi dị njikere ịgbanwe, mgbanwe nke uche, omume ọhụrụ na ilekwasị anya na ihe kpatara ya.
Otu aka nkuzi si arụ ọrụ:
Na NextMapping anyị nwere usoro nchịkwa nke onwe nke na-enyere ndị isi, ndị otu na ndị ọchụnta ego aka ịga nke ọma na ọkwa 'ọzọ'. Anyị na-eji usoro isii nke NextMapping iji mepụta atụmatụ nchịkwa omenala nke na-amalite site na ebe ị nọ ugbu a na ebe ịchọrọ ịga. Anyị na-amalite site na nyocha nke ọnọdụ gị ugbu a site na usoro Discover anyị na usoro nkuzi nkuzi gị niile anyị na-enyere aka chọpụta ike na mpaghara ohere iji mee ka ị nwekwuo arụmọrụ na nsonaazụ gị. Ndị nkụzi anyị bụ ndị ọkachamara NextMapping gbaziri agbawa ma jiri onye nchịkwa pụrụ iche / nyocha gakwuru iji soro gị rụọ ọrụ. Nduzi ndi ndu choro gi dika onye ndu ka ị di njikere ikwado onwe gi, ime ka gi na ndi mmadu megharia. Dị ka onye nchịkwa onwe gị gị anyị jidere gị ịza ajụjụ maka ebumnuche gị, anyị na gị ga-esoro gị Chọpụta atụmatụ ọhụrụ, anyị na-enyere gị aka ịtọpụta atụmatụ iji mepụta ọdịnihu ịchọrọ. Nweelarị ihe ịga nke ọma! Ndị ndu kachasị nwee ọ investụ na-etinye ego n'inwe echiche na nkwado nke onye nchịkwa nchịkwa. Ma ị nweela nkuzi nkuzi ma ọ bụ na ịnweghị, anyị nwere ike inyere gị aka iru ebumnuche gị niile.
Atụmatụ anyị jikọrọ ọnụ
Strategieszọ anyị si ejikọ anyị gụnyere sayensị, data, amamihe mmadụ na usoro iji kee mgbanwe na-adịgide adịgide.
Anyị nọ ebe a na NextMapping ™ nwere usoro ebumnuche pụtara ìhè na ụzọ nchịkwa iduzi iji nyere gị aka:
Jiri obi ike na ntụgharị ọsọ ọsọ nke mgbanwe na nsogbu na-aga n'ihu
Zụlite ikike okike gị na oge ihe ọhụụ
Chigharịa ihe ịma aka kachasị gị na nnukwu ohere gị
Nweta ihe ka ukwuu na 'ihe kpatara' na ihe ga - esote gị na azụmaahịa gị
Chegharia ma melite "OS" (mindset) lekwasịrị anya na otutu ma nye ndi ndu mgbanwe mgbanwe ohuru di egwu
Duru ndị otu gị na ụlọ ọrụ gị nke nwere atụmatụ ịbawanye mkpali nke onye ọrụ, iguzosi ike n'ihe na onyinye
Mee ka ndị ahịa mara ihe dị mma maka ị mepụta ụlọ ahịa
Atụmatụ digitization iji bulie ezi ọrụ maka onwe ya na azụmaahịa
Na-azụlite azụmahịa nke ukwuu
Nnukwu ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị
"Gịnị ka m / anyị kwesịrị ịgbanwe iji nwee nke ukwu n'ihu na ihe mgbaru ọsọ anyị na-arụpụta otu afọ site ugbu a?"
Nweelarị ihe ịga nke ọma - NA iji NextMapping ™ onye ndu nkuzi ga-ekwenye na ị ga-enwe ọganihu dabara na atụmatụ gị kacha mma. Nke bụ eziokwu bụ na ọ nwere ike ịbụ na ị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ dịka ị nwere ike, ike gị si na ihe siri ike gaa n'ike mmụọ nsọ na usoro ekwughachiri ma ịmara na ịnwe ọtụtụ oge nke mmụọ nsọ na itinye uche ga-eduga gị na ebumnuche gị. May nwere ike ikwe onwe gị na ndị otu gị nkwa nke anaghị eme n'ihi enweghị oge ma ọ bụ enweghị mkpa. The 'ihe' na kwesịrị ịgbanwe bụ na-elekwasị anya na-eke gị phenomenal n'ọdịnihu site n'enyemaka nke ihe ngosi ibe, a NextMapping ™ azụmahịa nchịkwa. Nduzi anyị NextMapping ™ na-enyere ndị isi aka dịka ị na-eji usoro nchịkwa NextMapping proven egosipụtara iji nyere gị aka iru ebumnuche gị. Email anyị na michelle@NextMapping.com ka iwelata ọrụ gị ọ bụla dị ọnụ maka nnọkọ.
Chee na Nduzi Nduzi anyi bu nsogbu kachasi mma nye gi?
NextMapping ™ bu usoro aka anyi nke na - enyere ndi otu aka, ndi isi, ndi otu na ndi na - azụma ahia ka ebulite ikike ha ịgagharị ọdịnihu na ị ga n'ihu ọrụ dị njikere ugbu a.
Nkuzi ndi ndu na ndi nkuzi ighoro ndi ndu ka ha bulie oru ha elu n’iru idi njikere ugbua.